သင်၏ Telegram Stickers များကို WhatsApp တွင်မည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း Androidsis
သင်၏ Telegram Stickers ကို WhatsApp တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း
Francisco Ruiz | | လဲ tutorial, Whatsapp
သင့်တွင်မည်မျှသစ္စာစောင့်သိသော Androidsis စာဖတ်သူများတွင် application ရှိသည် ကြေးနန်းနှင့် WhatsApp ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အသုံးပြုသည်? အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုလောင်းရလျှင်တယ်လီဂရမ်သုံးစွဲသူများ၏ ၉၉% သောအရာအားလုံးသည် WhatsApp ထက်များစွာကောင်းသည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများသည်ကြေးနန်းကိုမသွားချင်ကြပါ။
ဒီပို့စ်အသစ်မှာမင်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ပေးမယ် သင်၏ WhatsApp စတစ်ကာများကို Telegram တွင်မည်သို့ထားရမည်နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနှစ်ခုဆိုလိုသည်မှာ WhatsApp မှ Telegram Stickers ဖြစ်သည်။
1 သင်၏ Telegram Stickers များကို WhatsApp တွင်မည်သို့ထားရမည်နည်း
2 Telegram တွင်သင်၏ WhatsApp စတစ်ကာများထားရန်
3 ကွန်ပျူတာမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကို WhatsApp ဖန်တီးနည်း
4 ကွန်ပျူတာတစ်ခုမလိုပဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများ Telegram ဖန်တီးနည်း
သင်၏ Telegram Stickers များကို WhatsApp တွင်မည်သို့ထားရမည်နည်း
WhatsApp တွင်သင်ခံစားမိသည့်သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Telegram Stickers များရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုသင်ဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့်လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအတိုင်းသာလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
သောဗီဒီယို အခမဲ့ Android application တစ်ခုအပြင် Bot အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စတစ်ကာအစီအစဉ်များကို Telegram မှ WhatsApp သို့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်သော application များကို download လုပ်၍ လိုအပ်သော bot ကိုရယူရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ရှိလိုလျှင် - ငါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကရေးသားခဲ့တဲ့ဒီ post ကိုသင်သွားနိုင်ပါတယ် ဘယ်မှာ ငါလိုအပ်သောလျှောက်လွှာနှင့်ဖျောပွ StickersDownloader bot မှတိုက်ရိုက်လင့်များထားခဲ့ပါ.
Android application ၏ဒေါင်းလုပ်ရယူခြင်းနှင့် bot ကိုဖွင့်ရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ရယူရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
Telegram တွင်သင်၏ WhatsApp စတစ်ကာများထားရန်
အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သော Stickers အစုံအလင်ကို WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Telegram တွင်အသုံးပြုလိုသည်။စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအထက်မှာကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့တဲ့လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနောက်မှာငါတို့စတစ်ကာတွေကို WhatsApp ကနေ Telegram ကိုဘယ်လိုလွှဲပြောင်းရမလဲဆိုတာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာရပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုအရာတစျခုဖွစျသညျ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထုတ်ဝေခဲ့သောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကို လိုက်၍ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကို WhatsApp ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။Telegram ကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲ၊ သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရပြီးကတည်းကဒါဟာအဆင်ပြေပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုရန် (သို့) သင်၏တယ်လီဂရမ်လျှောက်လွှာတွင် WhatsApp မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Android ဆိပ်ကမ်းများမှအရာရာတိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်သာမကမည်သည့်အရာမျှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ.
ငါတို့လိုအပ်တာတစ်ခုတည်းသောအရာ၊ WhatsApp application၊ Telegram application နှင့်ကောင်းမွန်သော file explorer ကိုအသုံးပြုထားသည် como ES File ကို Explorer ကို o အစိုင်အခဲစူးစမ်းရှာဖွေသူ ငါဒီနေ့ငါအကြံပြုသောဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများဖြစ်ကြသည်။ (ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ES File Explore ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲမရတော့သော်ငြားလည်းသင်ရယူရန်လိုအပ်သည် ၎င်းကိုအခြားစတိုးဆိုင်များမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် Telegram ရှိ Androidsis Community မှတစ်ဆင့်ကူးယူရန်ကြိုးစားပါ.)
နောက်တော့ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာအစုံတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုချန်ထားလိုက်ပါတယ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စတစ်ကာများသည်မတူကွဲပြားသောအသုံးအနှုန်းများကိုမတူညီသောမျက်နှာများကိုတင်ပြီးမျက်နှာအမျိုးမျိုးကိုတင်နေသည်အကယ်၍ သင့်တွင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအယူအဆများရှိပါကသို့မဟုတ်သင်ဆွဲလိုပါကပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာပြုလုပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကို WhatsApp ဖန်တီးနည်း
သင် WhatsApp မှလုံးဝသွားနှင့်သင်လိုအပ်သည်အရာကဒီကနေအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကိုကွန်ပျူတာမရှိဘဲ Telegram အတွက်ဖန်တီးပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုသွားပြီး၊ အဲဒါကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြရမလဲဆိုတာရှင်းပြပါမယ် - \_ t
ကွန်ပျူတာတစ်ခုမလိုပဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများ Telegram ဖန်တီးနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » သင်၏ Telegram Stickers ကို WhatsApp တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း
BackFire မှာသင်ဟာ“ ထူးဆန်း” တဲ့ကျိန်စာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်
Join ယခုသင်သည်ဒေသအလိုက်ဖိုင်များကိုကူးပြောင်းနိုင်ပြီး Right Click နှိပ်၍ နှစ်သက်သော Command များကိုသုံးနိုင်သည်